Ayyaanni Irreechaa Birraa Hora Arsadiii Guddaan Goolabame. « QEERROO
October 3, 2016 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
lubbuun dabartee jirti.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo bifa Dhaadannoo waadaa waliif seenaa utuu deemuu bushoftuu naannoo sarkilii jedhamutti dhukaasi banamee rasaasan sobbontonni ajeefaman. walii gala hanga ammaatti lubbuu Oromoo hanga ammaa 300 ol akka darbee jiru dhagahameera.Keessattuu kanneen baqarra utuu jiranii lubbuun dabarte harki caalaan Shamarran Oromoo akka ta’an arginee jirra.
Ayyaanni irreechaa kan gammachuu taatullee lubbuu ilmaan Oromoo hedduu Biyyoon Bushooftu laqamsiteen garaa gaddaan addaan nu tamsaaftee jirti Qabsoon haalaan akka finiinu waadaa Qeerroon walii seene keessaa:-
1,Kana booda gaaffii mirgaa harka duwwaa magariisa baannee gaafannuuf ilmaan TPLFn ajajamanii warren rasaasa ummata Oromoo irratti roobsaniif deebii of irraa ittisuutti akka nu seensisaa waan jiraniif ummata keenya irraa karaa hunda roorroo ittisuuf qophii dha!
2,Qabsoo eegalame akkaan itti fufsiisuu
3, Naannoo fi Godina keessaa dhufne akkasumas bakkoota hojii fi manneen barnootaa keessatti Waltajjii Waayyaanee kamiyyuu hojiin ala gochuu,yoo kaate dubbatte diddaa agarsiisuu
4,Hidhamtoota siyyaasaa Oromoo haala ittiin baasuu dandeenyu irratti walii galuu Fkkf jechuun waadaaf irbuu walii seenanii jiru.
« Video Haala Irreecha Bishooftuu 2016
Gabaasa Haala Irreecha Hora Arsadee »